Ingaba bukhona ubomi emva kokufa? - Is there life after death?
Impendulo: Ingaba bukhona ubomi emva kokufa? Ibhayibhile iyasixelela, "Into ezelwe ngumfazi imihla yayo mifitshani yaye izele zinkathazo. Uphuma njengentyantyambo, abune; Ubaleka njengethunzi, angemi, Ukuba uthe umfo wafa, wophila na" (yhobhi 141-2)? Njengomsebenzi, phantse sonke siyasokoliswa ngulombuzo. Kanye Kanye kwenzeka ntoni kuthi emva kokufa? Ingaba sivele sibekho?
Ingaba ubomi lucango olujikelezayo elokuhamba kunye nokubuyela emhlabeni ukuze sifumane ubuncwane? Ingaba wonke umntu uya endaweni enye, okanye siya kwiindawo ezohlukeneyo? Ingaba enyanisweni likhona izulu nesihogo, okanye mhlawumbi yinto esengqondweni?